Bhora Valve, Tarisa Valve, Gate Valve - Newsway
We dzidzira mu mavharuvhu bhora, gedhi mavharuvhu, cheki mavharuvhu, pasi vharafu, shavishavi mavharuvhu, chivhariso mavharuvhu, strainer, kudzora mavharuvhu. Zvigadzirwa
API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Kana iwe uchida zvitupa zvedu, ndapota taura nesu sales@nswvalve.com )
CHEMAIKOKO UYE PETROCHEMICAL
CRYOGENICS NE LNG
PULP MAZIMAI NEPAPA
Newsway Valve Co., Ltd. inyanzvi maindasitiri mavharuvhu mugadziri uye ekisipota makore anopfuura makumi maviri nhoroondo, uye ane zviuru makumi maviri zveakafukidzwa musangano. Isu tinotarisa pane dhizaini, kugadzira, kugadzira. Newsway Valve inonyatso kuenderana neepasi rose mhando sisitimu yakajairwa ISO9001 yekugadzira. Zvigadzirwa zvedu zvinobata yakazara komputa-yakabatsira dhizaini masystem uye akaomesesa makomputa manhamba zvigadzirwa mukugadzira, kugadzirisa uye kuyedza. Tine yedu pachedu yekuongorora timu kudzora mavhavha mhando zvakanyatso, timu yedu yekuongorora inoongorora vharuvhu kubva kwekutanga kukanda kune yekupedzisira package, ivo vanoongorora ese maitiro mukugadzirwa. Uye isu zvakare tinoshanda pamwe rechitatu rekuongorora dhipatimendi kubatsira vatengi vedu kutarisa mavharuvhu asati atumirwa.
NYANZVI VALVE MUGADZI ISO9001 QUANLITY DZIDZISO SYSTEM NYANZVI TEAM KUSVIRA KUTENGESWA KOITI
Professional vharafu mugadziri
Newsway Valve Kambani yanga iri mukugadzira vharuvhu kweanopfuura makore makumi maviri uye ine ruzivo rwakapfuma mukugadzirwa kwevhavha uye kugadzirwa. Kambani yedu inochengeta iyo yekugadzira neyekugadzirisa michina inogara ichivandudzwa kuti ive nechokwadi chekugadzirisa chigadzirwa kunyatso
Strict mhando kudzora system
Sekureva kweiyo ISO9001 yemhando yekudzora manejimendi sisitimu, Newsway Valve Kambani inodzora nhanho dzese kubva kuvhavha yekukanda kuenda kumachina kuenda kugungano, kupenda, uye kuputira kuti uone kuti mavhavha anotumirwa kunze kwefekitori ari 100% anokwanisa.
Newsway Valve Kambani yakagadzirirwa nedhipatimendi rekugadzira, dhipatimendi rehunyanzvi, dhipatimendi rekutengesa, dhipatimendi remhando, dhipatimendi redhipatimendi, dhipatimendi rezvemari uye dhipatimendi rekutengesa-kushandira vatengi kushandira zvirinani uye nekukurumidza.
Newsway Valve Kambani inovimbisa kuti: Kana vatengi vakawana matambudziko ehunhu hwechigadzirwa, isu tinobatsira vatengi kupa uye kugadzirisa masevhisi emahara. Batsira vatengi kubata nezvinetso nekukurumidza